blood – Healthy Life Journal
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အောက်ဆီဂျင်၊ အာဟာရဓာတ်နဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို တစ်ရှူးတွေဆီ သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့အတွက် သွေးက အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကောင်းမွန်နေအောင် သွေးသန့်စင်ပြီး အဆိပ်အတောက်ကင်းအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ မရှိမဖြစ် အရေးပါနေပါတယ်။ ကျောက်ကပ်နဲ့...
သွေးခဲခြင်းမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပြီး အသက်ကယ်တင်နိုင်မည့် နည်းလမ်းကောင်း ၁၀
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကွန်ပျူတာနဲ့ တီဗီရှေ့ မှာ အထိုင်များလွန်းပြီး လှုပ်ရှားမှုမရှိတာက သွေးခဲတာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးခဲက အဆုတ် ဒါမှမဟုတ် နှလုံးမှာ သွားပိတ်ဆို့ရင် နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဘာစားသင့်သလဲ၊ ဘာလုပ်သင့်သလဲ၊...
——-၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊——- Q. ကျွန်မအဘွား အသက် ၇၀ ရှိပါပြီ။ သွေးကျဲဝေဒနာလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်မသိချင်တာက သွေးကျဲတဲ့ဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေမှာ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရင် အခက်အခဲရှိပါသလား သိချင်လို့ပါ။ Nilar(FB) A. သွေးကျဲနေတော့ Platelets...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သွေးတွင်းကောင်းတဲ့ ကိုလက်စရော မြင့်တက်ပြီး မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထ ရောလျော့ကျစေဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ (၁) တစ်နေ့လျှင် အစာကို ခြောက်ကြိမ်နှင့်အထက် စားပေးပါ ဗြိတိန်အရွယ်ရောက်သူတွေကို လေ့လာမှုကြီးတစ်ခုအရ တစ်နေ့အစာကို ခြောက်ကြိမ်နဲ့အထက်၊ တစ်ကြိမ်စားရင် နည်းနည်းချင်းစီ စားတဲ့သူတွေဟာ...